Myanma News » ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… Change your Perception	23
ရာမည says: ဒီရက်ပိုင်း လူရော စိတ်ပါ အရမ်းပင်ပန်း ပြီး ဘယ်လိုမှ မအားနိုင်ဖြစ်နေလို့မရေးတော့ဘူးလို့နေနေတာ ။ဒါပေမယ့် ရေးဖြစ်သွားတယ် ။စာတော့ တော်တော်ရှည်သွားတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုံးအောင်တော့ ဖတ်ပေးပါ ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘာသာရေး ဆေးထိုးတာလောက် ယုတ်ညံ့သူ မရှိ.. အေးလေ ရဲဆိုတော့လဲ…။
pooch says: အင်မတန်လက်တွေ့ကျတဲ့ သုံးသပ်ချက်ပဲ
လို့ ပြောလည်း ပြောချင်တယ် ပြောလည်း မပြောရဲဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကြိုက်တယ် ကိုရာမညရေ
kai says: ဘကကျောင်းပိတ်ခိုင်းဖို့.. ကျောင်းသားတွေတင်သွင်းဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့တင်.. ကျောင်းသားတွေကို… တော်တော်အထင်ကြီးသွားပြီ…။
ကျောင်းဆိုသည်မှာ.. ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင်သာ..ပြဌာန်းခွင့်.. လွတ်လပ်စွာရှိသင့်..ရှိနေကြပါကြောင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 506
ရာမည says: အာ့ ကျွန်တော်မရေးဘူးနော်
ဦးကြောင်ကြီး says: ရဲအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု သပိတ်ကျောင်းသားတဦး အတွေ့အကြုံ
ခင်ဇော် says: Credit to Theka Moe Nyo
အပြစ်လုပ်သူထက် ခံရသူကို အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အလေ့အထပါ။ “မုဒိမ်းကျင့်တာတောင် နည်းသေး။ နင်က မြူဆွယ်သလို ဝတ်တာကိုး ဆိုတဲ့ စတိုင်ပါ”
တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကွန်ဖလစ်တစ်ခုဟာ အကောက်အယူကိစ္စပါ။
ဘယ်သူမှား ဘယ်သူမှန် ပြောရခက်ပါတယ်။ အဲဒီ ကွန်ဖလစ်ကို မတရားနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလာရင် ကွန်ဖလစ် အစ်ရှူးက သတ်သတ်ပါ။
ဖြစ်မှာပေါ့ ဆရာတော်ကြီးစကားမှ နားမထောင်တာ။ အလကားဟာတွေ သေမှအေးမယ် ဆိုသူတွေ ဒါလေး သိစေချင်တာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ရော့ရော့…ဒီမှာက… ပုံရိပ်လေး….
မရိုက်ချင်ပဲ (မရိုက်ချင် ရိုက်ချင်နဲ့) ရိုက်နေကြတာလေးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ပညာရေးဥပဒေပြင်ဖို့ တောင်းဆိုတာတောင် ဒီလောက် ခံ ရတာ။
ညောင်၂ပင် ဥပဒေထဲက သူတို့ အကျိုးစီးပွါး တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ထားတဲ့ အချက်တွေ ပြင်ဖို့ ဆို ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းကြတာပေါ့ လေ နော့!!!
Alinsett@Maung Thura says: စဉ်းစားလေ . . . ပြီးရင် ဆုတောင်းးးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: မသိလို့ မေးဦးမယ်..
ဦးကြောင်ကြီး says: အလိင်ခံချဉ်သူတွေ အတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာပေါ့ကွဲ့.. ကြည့်ထား အကယ်ဒမီ ရလိပ်မဲ..
kai says: ဒေါ်စုတယောက်လုံးရှိနေတာပဲ..
အဲလိုမသိပဲ.. အစိုးရတက်ဖြစ်နေတာကိုကလည်း.. အံ့စရာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အာလဖွားယီး အသံမထွက်​
ဦးကြောင်ကြီး says: မ၄ယှားကို ဖုံးဆက်မို့ လိုင်းမကောင်းသေးလို့တဲ့.. အဲသာကြောင့်ပေါဒ အမ်ပီတီလိုင်း မသုံးပါနဲ့ဆိုဒါ ပေါမယဘူး.. စစ်တပ် အထင်လွဲမှာ စိုးရို့တဲ့…
kai says: … ဒီခေတ်လူငယ်တွေကို ပြောချင်တာက…။
kai says: ကြုံလို့ဆက်ပြောရရင်.. ၈၈ တုံးကကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေလို့.. သိတာတွေရှိတယ်..။
အခုလည်း….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဒီချုပ်​​တော့မဲနိုင်​ပါရဲ့ ၁၉၉၀ တုန်းကလို အာဏာ လွဲ မ​ပေးရင်​ ဘိုလုပ်​မလဲ သူဂျီးရဲ့ ။ အခုလုပ်​​နေပုံက နိုင်​ငံ​တော်​ အာဏာ ကို အ​သေရရ အရှင်​ရရ ဆုတ်​ကိုင်​ထားချင်​​သေးတဲ့ ပုံမျိုး ။
မြစပဲရိုး says: အခုဟာက အဲဒီ အဆင့် အထိ မရောက်နိုင်အောင် (တနည်း) ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်အောင် ကို နည်းမျိုးစုံ သုံး နေတာပါ။
kai says: ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာပါ..
စစ်တပ်က.. ကြည့်ရတာ.. ၀န်ကြီးအဖွဲ့အသစ်တောင်ရေးပြီးနေပြီ.. မဲ .. ဘယ်လောက်ဒီချုပ်ဖက်ပါသွားမလဲ.. ချိန်ဆစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့…ထင်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ တော့ သိပ်လောဘ မကြီးပါဘူး။
black chaw says: ရေးမလို့ပါပဲ…။